Can the planet wait for COVID immunity in Africa? | Health News
Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Azon'ny planeta atao ve ny miandry ny tsimatimanota COVID any Afrika?
Azon'ny planeta atao ve ny miandry ny tsimatimanota COVID
Mpanoratra Galileo Violini
Fa maninona no te-ho any amin'ny volana na Mars isika, raha efa manana planeta maro samihafa eto ambonin'ny tany?
Ny programa vaksinin'ny COVID isan-karazany dia mitranga tsy miankina amin'ny tsirairay.
Izany dia mahatonga ny zavatra tanterahina any Etazonia ohatra, lavitra be ny zava-mitranga any Afrika.
Etazonia dia afaka mahazo ny tsimatimanota 70 isan-jaton'ny mponina vita vaksiny amin'ny volana jolay amin'ity taona ity raha any Afrika kosa dia tsy hitranga mandritra ny fito taona sy tapany.
Tany Etazonia, nisy lesoka tamin'ny olombelona nanimba ny vaksinin'ny Johnson & Johnson 15 tapitrisa. Nanome toky i Johnson & Johnson fa tsy hisy fiatraikany amin'ny fahatanterahan'ny 24 tapitrisa kasaina hatolotra amin'ny faran'ny volana aprily. Amin'ity vonjy taitra ity dia tsy nisy ny olana tamin'ny famokarana. Ahoana ny fiantraikan'ireto olana ireto amin'ny vaksiny ary afaka miandry ny fiarovana ny COVID ve ny planeta?
Nisy ny olan'ny famokarana, na izany aza, iray volana sy tapany lasa izay, raha nanambara i J&J fa misy mpamokatra manana olana amin'ny fanamarinana tavoahangy. Raha izany, ny orinasa, raha nanambara fa hampihena ny famokarana izany ary 40 isan-jato amin'ny famatsiana voalohany ho an'i Etazonia, dia nametraka teo ambony latabatra ny fahafaha-mamindra ny famenoana ary mamita ny Etazonia. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony nanahy i Eropa, izay mety hanohy handray ny doka 200 tapitrisa amin'ny faran'ny 2021, raha mazava ho azy fa tsy hametraka fetra amin'ny fanondranana vaksiny i Etazonia satria nitranga herintaona lasa izay ny rivotra, sarontava ary fonon-tànana (Fandaharana an'ny Fetin'ny 10 aprily). Ankoatr'izay, 3 herinandro lasa izay, nanambara i Reuters fa ny J&J dia mety tsy afaka nanome an'i Eropa ny doka 55 tapitrisa nokasaina hatao tamin'ny volana Jona noho ny olana eo amin'ny famatsiana, ary amin'ity tranga ity dia toa tsy afaka nametraka ireo mekanisma taloha araraoty ny fiantraikan'ny tranga 15 tapitrisa dosie.
Any Eropa, ny olana sedraina any amin'ny firenena sasany amin'ny fampiasana AstraZeneca dia mety hampihena ny fampielezana vaksinina izay mandeha tsara tokoa, na dia misy aza ny olana. Ohatra, any Italia, izay nametrahan'ny Kaomisera misahana ny vonjy taitra ho kendrena fanaovana vaksiny 500,000 isan'andro, dia faritra 3 no nahita ny tenany tsy nanana famatsiana, na dia kely fotsiny aza ny famoahana ny drafi-vaksiny.
A Lahatsoratra NYT nanomboka ny tapa-bolana lasa izay dia manome fanazavana mahaliana momba ny zava-nitranga sy ny zava-mitranga any Etazonia sy Eoropa, izay, mikasika io olana io, dia nitondra tena toy ny planeta samihafa.
Ny planeta fahatelo dia i Amerika Latina, izay nanombohan'ny vaksininy tonga 3 volana taorian'ny nanombohan'ny vaksiny tany Great Britain. Ary, na dia nifanaraka tamin'ireo mpamatsy azy toa an'i Eropa aza izy, dia tsy maintsy niandry, ary manohy miandry, lava kokoa noho i Eropa, ary miafara amin'ny fiankinan-doha amin'ny famatsiana vaksinina sinoa.
Ary eo koa ny planeta fahefatra, Afrika, izay, ankoatran'i Maroc, dia miankina amin'ny programa COVAX indrindra, na dia olana 2 aza no tsy raharahina, izay, raha tsy misy vaksininy, dia nohamaivanina ny fifandraisan - ny tsy fahampian'ny mpiasan'ny fahasalamana mahay sy ny loharanom-bola voafetra ho an'ny fitantanana eo an-toerana aorian'ny fiterahana.
Ary hisy planeta bebe kokoa - Great Britain, Azia miaraka amin'ny planeta atsimon'i Shina sy India, Oceania - samy manana ny politikany momba ny famatsiana sy ny fanaovana vaksiny.